Madaxweynaha Puntland oo u safray Kismaayo si uu uga qaybgalo caleemosaarka Axmed Madoobe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo u safray Kismaayo si uu uga qaybgalo caleemosaarka Axmed Madoobe
October 10, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne Deni iyo wefdiga uu hoggaaminayo ayaa saakay oo Khamiis ah ka tagay Garoowe. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wefdi balaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta u safray magaalada Kismaayo, halkaas oo ay uga qeybgali doonaan caleemosaarka madaxweynaha Jubbaland.
Munaasibada caleemosaarka Axmed Madoobe oo dabayaaqadii bishii Agoosto dib loogu doortay madaxweynaha Jubbaland ayaa labo jeer oo hore baaqatay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay xayiraad duulimaadyada diyaaradaha ah ay saartay Kismaayo.
Axmed Madoobe oo markii saddexaad loo caleemosaaray madaxweynaha Jubbaland
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal katirsanaa dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah lagu dilay qarax ka dhacay gudaha Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaashu. Cabdiraxmaan Afleershe ayaa la dilay kadib markii miino gaarigiisa loogu rakibay ay ku [...]